Master Master voalohany ho an'ny LAN amin'ny Debian 6.0 (I) | Avy amin'ny Linux
Natombokay ny andian-dahatsoratra momba Ahoana ny fametrahana sy ny fametrahana DNS Master Cache voalohany ary ny cache amin'ny Debian Squeeze?, izay kasainay homena a Fandraisana amin'ny tontolo mahavariana an'ity serivisy tena ilaina ity ho an'ny fiasan'ny Network of Networks izay Internet.
Ny lahatsoratra rehetra dia novolavolaina mba hahafahan'izy ireo mampiasa manaraka azy. ny 1 y 2da ny ampahany dia misy ny fahalalana teorika farafahakeliny ilaina amin'ny Vaovao na Newbie afaka mahatakatra sy mampivelatra ny fametrahana DNS.
Manoro hevitra azy ireo izahay mba tsy hatahotra. Vakio sy ampiharo izay voasoratra dia azo antoka fa hahazo valiny tsara ianao. Ary ho an'ireo Matetika Matetika latsaka ao anaty famoizam-po, dia mamporisika anao ho tony, milamina tokoa raha tena tianao ny hahatakatra ny fomba handefasana an'io serivisy tena ilaina io.
Mamelà ahy ny fampiasana ny teny amin'ny teny anglisy sy ny anglicism hafa. Natao io mba hahazoana mazava ara-teknika amin'ny asa soratra.
Ireto ny lafiny hovolavolainay amin'ity fizarana voalohany ity:
Fikirakirana DNS mahazatra indrindra
Faritra sy firaketana
2 Famaritana mahasoa
3 Fikirakirana DNS mahazatra indrindra
4 Faritra sy firaketana
5 Faran'ny vanim-potoana na faran'ny vanim-potoana
Nilaza izy ireo tao amin'ny Village WWW fa ny DNS dia iray amin'ireo faritra maizina indrindra amin'ny serivisy tambajotra. Soa ihany fa tsy izany no izy - indrindra ho an'ny LAN - satria hasehontsika amin'ny alàlan'ireto lahatsoratra manaraka ireto. Raha betsaka ny olona tsy maniry an'io dia saika tsy maintsy atao ny mamaky ampahany kely amin'ny teôria.
Famaritana araka ny Wikipedia:
El DNS dia angon-drakitra voazara sy hierarchical izay mitahiry fampahalalana mifandraika amin'ny anaran'ny sehatra amin'ny tamba-jotra toy ny Internet. Na dia toy ny angon-drakitra aza DNS dia afaka mampifangaro karazana fampahalalana isan-karazany amin'ny anarana tsirairay, ny fampiasana matetika indrindra dia ny fanomezana ny anaran'ny sehatra amin'ny adiresy IP sy ny toerana misy ny mpizara mailaka isaky ny sehatra.
Ny fanomezana anarana ny adiresy IP no tena endri-javatra malaza indrindra amin'ny protokol DNS. Ohatra, raha 200.64.128.4 ny adiresy IP an'ny tranonkala prox.mx FTP, dia mahatratra ity solosaina ity ny ankamaroan'ny olona amin'ny famaritana ny ftp.prox.mx fa tsy ny adiresy IP. Ankoatra ny mora tadidy dia azo itokisana kokoa ilay anarana. Ny adiresy isa dia mety hiova noho ny antony maro, tsy mila manova anarana ianao.
Tamin'ny voalohany, DNS dia teraka tamin'ny filàna hahatadidy mora foana ny anaran'ny lohamilina rehetra mifandray amin'ny Internet. Tamin'ny voalohany, SRI (SRI International ankehitriny) dia nampiantrano fisie antsoina hoe HOSTS izay misy ny anaran'ny sehatra fantatra rehetra (ara-teknika, misy io rakitra io, ary ny ankamaroan'ny rafitra miasa ankehitriny dia azo alamina hijerena ny rakitrao mpampiantrano). Ny firoboroboan'ny tamba-jotra dia nahatonga ny rafitra fanoratana afovoany ao amin'ny rakitra fampiantranoana tsy mandeha amin'ny asany ary tamin'ny 1983, Paul Mockapetris dia namoaka RFCs 882 sy 883 namaritra izay lasa niova ho DNS maoderina. (Ireo RFC ireo dia nanjary lany andro tamin'ny famoahana ny RFC 1987 sy 1034 tamin'ny 1035).
Ireo solosaina iasan'ity serivisy ity dia antsoina "Serivera anarana". Debian dia nitondra programa fitahirizam-bola maro hanana DNS miasa ary anisan'ireny no be mpampiasa indrindra amin'ny Internet: hamatotra o "Domain Domain Naming Internet".
Fatorana no fenitra de facto amin'ny maha mpizara DNS. Izy io dia rindrambaiko maimaim-poana ary zaraina amin'ny ankamaroan'ny sehatra UNIX sy Linux. Nantsoin'izy ireo koa hoe "BIND"atao hoe”(Daemon antsoina hoe). Afaka mahita ianao eto (Wikipedia amin'ny teny anglisy) fampitahana karazana server DNS isan-karazany.
NetBIOS: Network Basic Input / Output System (NetBIOS): Rafitra fidirana sy fivoahan'ny tambajotra fototra (NetBIOS). Fandefasana programa fampiharana (API) izay azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny programa amin'ny tamba-jotra eo an-toerana (LAN).
NetBIOS dia manome programa miaraka amina andiana baiko mitovy amin'ny fangatahana ireo serivisy avo lenta ilaina hitantanana anarana, fivoriana mivantana ary handefasana "datagrams”Eo anelanelan'ny tendron'ny tamba-jotra.
Anaran'ny NetBIOS: Ny anaran'ny 16-bit an'ny dingana iray izay mampiasa ny Basic Network Input / Output System (NetBIOS). Anarana eken'ny serivisy WINS (Windows Internet Name System) an'ny Microsoft, izay mampifandray na "map" solosaina na anaran'ny mpampiantrano amin'ny adiresy IP manokana.
FQDN: "Anaran-toerana mendrika feno" o Anaran-toerana mendrika feno. Satria mazàna matetika ny fandikana anarana noforonina tamin'ny teny Anglisy teknika, dia mamporisika anao hianatra ilay anarana amin'ny teny Anglisy aho ary ho an'ny tanjona azo ampiharina dia miantso azy hoe FQDN. Tsy inona izany fa ny DNS Domain Name izay napetraka mba hanondro ny toerana misy azy ao amin'ilay hazo namespace.
Mifanohitra amin'ny anarana mahazatra, a FQDN mialoha ny fe-potoana iray hanondroana ny toerana misy azy eo am-pototry ny namespace. Ohatra: freake.amigos.cu. izy ve FQDN avy amin'ilay mpampiantrano manana ny anarany NetBIOS freake ary an'ny domain amigos.cu.
friends.cu. freake.amigos.cu. otropreake.amigos.cu. mail.amigos.cu.
Azontsika atao ny manamboatra DNS na Domain Name Server amin'ny fomba samihafa hanomezana serivisy samihafa. Ny be mpampiasa indrindra dia:
Cache Server ("Caching Nameserver"): Ny fangatahana na ny fangatahana natao tamin'ny mpizara dia ho voavahan'ireo Forwarders izay ambaranay amin'ny fikirakiranao. Ny valiny dia hotehirizina ary "tadidy" raha ny Cache Server no anontaniana indray, izay mampiakatra be ny hafainganan'ny valiny.
Mpampianatra voalohany ("Mpampianatra voalohany"): Ny fangatahana na ny fangatahana natao tamin'ny mpizara dia ho voavaha amin'ny famakiana ny angona voatahiry ao amin'ireo rakitra eo an-toerana an'ny Zona noforonina. Araka ny asehon'ny anarany, dia ho mpizara anarana manampahefana ho an'ny faritra niaraha-nidinika.
Mpampianatra faharoa ("Mpampianatra faharoa"): Ny fangatahana na ny fangatahana natao tamin'ny mpizara dia hovahana amin'ny alàlan'ny fifampidinihana mivantana amin'ny lohamilina Master Master voalohany ho an'ny Zone consulted. Mitazona kopia farany an'ny Zona Tompon'ny Kilonga.
Azontsika atao ihany koa ny manamboatra azy io mba hahafahan'izy ireo manao asa maro miaraka amin'ny fotoana iray, toy ny maha-Master Primaire sy Caché azy ireo amin'ny fotoana iray, izay fahita eo amin'ny tamba-jotra aman-draharaha eto amintsika.
ny faritra dia rakitra an-tsoratra tsotra mamela antsika handamina ny Firaketana DNS. Ny anaran'ny faritra tsirairay dia mifanaraka amin'ny anaran'ny sehatra, na isan-karazany ny adiresy IP toy ny subnets iray na maromaro. Ahitana, ankoatry ny angona hafa, isan-karazany Records amin'ny Kilasy na Karazan-karazany samihafa, izay tsy holazainay ihany ireto manaraka ireto:
SOA: "Fanombohan'ny fahefana". Fiandohan'ny fahefana. Izy io dia firaketana an-tsoratra tsy maintsy atao isaky ny Faritra, ary tokony iray ihany isaky ny rakitra. Izy io dia fampidirana mialoha an'ireo rakitra zona rehetra. Farito ny faritra; izay masinina na mpampiantrano azy avy; iza no tompon'andraikitra amin'ny atiny; izay ny kinova ny fisie zona, ary ny lafiny hafa momba ny fiasan'ny DNS server. dia manan-danja fa isaky ny rakitra zona dia misy karazana firaketana A izay mamaritra ny masinina na mpampiantrano izay itoeran'ny mpizara DNS.
NS: Sarintany anarana ho an'ny Server Server. Ny sehatra tsirairay dia tsy maintsy manana firaketana NS farafaharatsiny. Ity rakitsoratra ity dia manondro ny DNS Server izay afaka mamaly ny fangatahana momba ilay sehatra. Azonao atao ny manondro ny mpampianatra any amin'ny Kilonga na ny mpampianatra faharoa.
A: "Address" - (Toro lalana). Ity firaketana ity dia ampiasaina handikana ny anaran'ireo mpampiantrano amin'ny adiresy IPv4.
AAAA: "Address" - (Toro lalana). Ity firaketana ity dia ampiasaina handikana ny anaran'ireo mpampiantrano amin'ny adiresy IPv6.
CNAME: "Anaran'ny Canonical" - (Anaran'ny Canonical). Karazan-dahatsoratra izay ahafahantsika manome anarana maro ho an'ny mpampiantrano na mamorona Alias ny. Andao lazaina fa manana ny tranonkala host.amigos.cu. izay nametrahanay mpizara tranonkala ary tianay izy ireo ny hiantso azy hoe www.amigos.cu. Avy eo ao amin'ny Zone Friends.cu dia tsy maintsy anananay amin'ireo rakitsoratra hafa:
tranonkala IN A 192.168.10.20 www IN CNAME web.amigos.cu.
MX: "Exchange Exchange" o Mpizara mailaka. Fampahalalana ampiasain'ny mpizara mailaka hafa hahafantarana izay handefasana mailaka nomena adiresy IP. Ny rakitra MX tsirairay dia manana laharam-pahamehana, ka ny avo indrindra dia ny firaketana miaraka amin'ny isa ambany indrindra. Ohatra:
PTR: Fametahana adiresy IP amin'ny anarana. Karazana firaketana voatahiry ao amin'ilay antsoina hoe "Reverse Zones". Ohatra, ny Zone 10.168.192.in-addr.arpa no iray izay misy ny sarintany rehetra amin'ny adiresy rehetra ao amin'ny laharana adiresy IP 192.168.10.0/24
Mazava ho azy fa mandeha ny lisitry ny karazana firaketana ...
Faran'ny vanim-potoana na faran'ny vanim-potoana
Rehefa mamorona ny fisie ho an'ny Zones of DNS records isika dia tsy maintsy manamboatra ny Expiration Times afaka segondra. Na izany aza, azontsika atao ny mamaritra azy ireo amin'ny fomba fohy kokoa araka ity tabilao manaraka ity:
Tokony hitandrina tsara isika rehefa manoratra amin'ny rakitra zona. ny FQDN tsy maintsy miafara amin'ny "."(izany hoe, Punto), ary tsy afaka mamela toerana banga amin'ny faran'ny tsipika tsirairay isika. Noho izany antony izany dia tena ampirisihinay mafy ny fampiasana ireo mpampanonta console toy ny vi na ny Nano. Hampiasa ny Nano, izay araka ny hevitray dia mora ampiasaina. Mazava ho azy fa afaka mampiasa tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra tsotra miaraka amin'ny tontolo misy sary na GUI ihany koa isika.
Manantena aho fa tsy nankaleo anao satria mbola misy kely ny manadihady momba an'io.
Misy "Backends" hafa ho an'ny mpizara DNS toa ny LDAP, MySql, PostgreSQL, SQLite, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Master Master voalohany ho an'ny LAN amin'ny Debian 6.0 (I)
Toa tsara sy feno ilay lahatsoratra, manantena aho fa hamaky azy io tsy ho ela.
Tena ratsy aho any am-piasana satria tiako ny mamaky azy tsara ...
Tsara ny nametrahanao ireto lahatsoratra ireto eto ... misaotra anao tamin'ny fanampianao Fico 😀
Tena tsara! Miandry ny faritra hafa dia mendrika ireto post misy "substant" ireto, misaotra
Lahatsoratra tena tsara ry namako akaiky FICO
Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra .. 🙂
Salama Fico, hey ary mieritreritra ve ianao fa afaka manome torohevitra vitsivitsy amiko hametrahana serivisy Linux DNs ho an'ny tambajotranoko, mbola vaovao ihany aho amin'izany ary tsy manome serivisy araka ny antenaina ho an'ireo mpampiasa ahy izy ireo.
Script: Manova ambadika GDM ary manara-maso Gamma miloko